I-China S921 ngesantya esiphezulu sebhubhu ethambileyo ilebheli yokuvelisa kunye neFektri I-S-conning
Ingakumbi ifanelekile kwizithambiso, iimveliso zokhathalelo lomntu, ukutya kunye nezinye izinto zokupakisha zeshishini.
Faka isicelo seemfuno zokufakwa kophawu kwityhubhu ethambileyo ejikeleze & engenanto, nayo inakho ngokweempawu zetyhubhu ethambileyo ukubeka iileyibhile kwindawo.
Isantya esiphezulu se-S921 esineSantya esiphezulu sebhubhu yokuthambisa ityhubhu ixhobile ngetekhnoloji yolawulo lwenetcon entsha kunye nekhawulezayo (ngokuzithandela). Ngokucofa nje isikrini sayo esinye sokuchukumisa, unokuhlengahlengisa ngokulula useto olwahlukeneyo lweemfuno zemveliso yakho.
Umatshini wethu nabaqhubi be-servo bazisa iileyibhile ezichanekileyo kunye nesantya esiphindaphindayo. Isilungisi esinamavili esandla esifikeleleka ngokulula kunye nolungelelwaniso lomgaqo kaloliwe osecaleni uvumela "ixesha elongezelelekileyo" kumgca wakho wemveliso! I-S921 isetyenziswa kuwo onke amashishini anje ngamayeza, iimveliso zokhathalelo lomntu, ukutya, iivithamini, izinto zokuthambisa, kunye neekhemikhali, apho ukuthembela okukwinqanaba eliphezulu kungumyalelo wokuvelisa ngokufanelekileyo.
Kulula ukusebenza kunye nolwakhiwo olumbeneyo: Misa okwesikhashana iilebheli xa kungekho galelo lezinto, indawo yokulungisa ngokuzenzekelayo xa kungekho ilebhile, kunye nomsebenzi ozenzekelayo wokukhangela umsebenzi.
Umatshini uphela ulawulwa yikhompyuter, uzingela ngokuzenzekelayo iibhotile zesithembiso
kunye nelebheli ngokulandelelana, kunye nezixhobo zinokuxhotyiswa ngomatshini oshushu wokushicilela
yamkele ulwabiwo oluthe tyaba, ukugoba ngokunxibileyo kweelibhanti ukuqinisekisa ukuchaneka kwelebheli kunye nesantya.
Ukusuka kuyilo, okokuqala ukusebenza, ulawulo, ulondolozo kunye nemigca yemveliso yexesha elizayo, i-S-conning cinga ngakumbi kuwe nakwinkampani yakho.
Incwadana yokusebenza eyakhiweyo yokusebenza: abaqalayo bangafunda kwisiboniso sendlela yokusebenzisa oomatshini ngexesha elifutshane. Oku konga imali kunye nexesha ngexesha loqeqesho.
Incwadana yemigaqo yokusombulula ingxaki eyakhiweyo: umboniso uza kukhokela umsebenzisi ngokusombulula ingxaki.
-Ulungelelwaniso lobungakanani beelebheli olusebenzisekayo: Ulawulo lwemihla ngemihla lwe-HMI luvumela umsebenzisi ukuseta iiparameter zelebheli.
Inkqubo yolawulo lwelebheli isebenzisa ipaneli enkulu yokuthinta isikrini, eqinisekiswe yimigaqo ye-CE kunye ne-UL yokubeka iliso ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo kwenkqubo yokuphawula.
-Le nkqubo ikhethekileyo nenobuchule inokuqinisekisa ukuba ukusetwa kwelebheli kulungiselelwe ngokuchanekileyo kwaye kusetyenziswe kwindawo efanelekileyo.
-Ilebheli ekhawuntarini-igcina umkhondo wobungakanani beemveliso ezenziwa ngumatshini.
I-counter-set-counter - ubungakanani bunokucwangciswa kwangaphambili kwimveliso yemveliso kwaye umatshini uya kuyeka ngokuzenzekelayo njengoko isixa sifunyenwe.
-Ukuchukumisa ngokulula isikrini kukuvumela ukuba ulibazise usetyenziso lweelebheli kunye nokuhlengahlengisa indawo yeelebheli.
Sinikezela ngaphezu kokuba unqwenela
Inkqubo yokubhala ilawulwa yi-Nokia encinci ye-PLC, ukuqinisekisa ukusebenza ngokukhawuleza nangokuzinzileyo.
Sebenzisa isiphelo se-fiber optics esineempawu eziphezulu kunye ne-infrared sensors (Keyence / Lion / Dalsa / Sick / Leuze) yokuchonga ngokuchanekileyo kunye nokwenza umqondiso ngaphandle kokuphazamiseka.
* Isikrini sokuchukumisa se-HMI: Ikhusi lolawulo lokuchukumisa lomntu
Ulondolozo lulula kwaye lusebenza kakuhle.
Isilawuli sokuhamba rhoqo kwesiguquli esiqinisekileyo sokuqinisekisa uzinzo lwesantya kunye +/- 0.5% inqanaba lokungachani.
Inxalenye yesikhokelo sikaloliwe senziwe ngealuminium esemgangathweni egqunywe ngeplastikhi enxibe nzima ukuze kuqinisekiswe iileyibhile ezichanekileyo kunye nokukhuselwa kwemveliso, ukugcina imveliso yomthengi inomdla kwaye ikwimeko egqibeleleyo.
Isiseko seLebeler senziwe ngentsimbi engenasici ukuze kuqinisekiswe ngokupheleleyo ukuthintela ukurusa. Olu luyilo luqinisekisa ukuba umatshini kunye nendawo yemveliso yococeko iyagcinwa ehambelana nemigangatho ye-GMP.
Amavili agcina umatshini ephatheka kakuhle, efanelekileyo xa ushenxisela kwimigca eyahlukeneyo yemveliso. La mandla axhasayo anyusa ixabiso lotyalo-mali lwakho.
Ubukhulu (L) 2083 x (W) 929x (H) 1870mm
Ubungakanani besikhongozeli I-20-50mm (L) 66-185mm
Ukuchaneka kwelebheli ± 0.5 ~ 1.0mm
Egqithileyo Umatshini wokulebhelisha osezantsi kwilipstick
Okulandelayo: S308 Isantya esiphezulu somatshini wokulebhelisha ibhotile
Inkqubo yokuPhawula i-Tube
Umatshini wokuPhawula i-Tube ngokuzenzekelayo
Oluzenzekelayo Tube Sealer
Semi oluzenzekelayo Tube lokufaka
Umatshini wokuPhawula ngeThubhu
Tube Ukutywina Umatshini
Isihluzi seTyhubhu esetyenzisiweyo
Umshicileli weLayibhile yeeBhotile zeJar, Umatshini wokuTywina wePlastiki, Umatshini wokuPhawula iBhotile yoRhwebo, Indibano yesirinji kunye neNkqubo yokuPhawula, Phezulu kunye nasezantsi kwelebheli, Umatshini wokufaka iilebheli kwiibhokisi,